Iyadoo dhererka waqtiga rikoorrada shaashadda waxaa lagu helo muhiimadda ay leedahay oo dhan waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in dadka isticmaala ay doonayaan in ay hubiyaan in barnaamijka software fiican ee jira si ay u taageeraan hawlaha iyo arrinta guud ee la xiriira duubo shaashadda waxaa sidoo kale lagu sameeyey sifooyinka wanaagsan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka arrintan la xiriira ee sida taariikhqorihii screen cute aan la soo bandhigay oo keliya la sameeyo, laakiin shaqada waxaa sidoo kale lagu sameeyey qaab iyo fasalka.
Top 10 Talooyin ku saabsan taariikhqorihii screen cute
Hoos ku xusan yihiin ugu sareeya toban talooyin la xiriira oo taariikhqorihii ahaa screen cute iyo shaqada iyo sida loo samayn karaa kaamil ah.
Qaab 1. Output
User waxay u baahan tahay si ay u hubiyaan in qaab wax soo saarka la doorto si waafaqsan shuruudaha iyo daaha diiwaan waxaa had iyo jeer la horumariyo qaab la mid ah. Qaybta in la muujiyay in shaashadda hoose waa in la raaco iyo qayb ka mid ah iftiimiyay waa in la isugu soo dul si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay marka loo eego qaab wax soo saarka waxa ka hooseeya dooda ah.
2. Options barnaamijka
User waxay u baahan tahay si ay u hubiyaan in fursadaha barnaamijka ayaa sidoo kale sahamiyey si isticmaalka waxaa lagu sameeyaa iyadoo la raacayo shuruudaha barnaamijka iyo wax soo saarka ah in la doonayo in arrintan la xiriira. Waxa kale oo uu oggolaan in user si loo hubiyo in ugu fiican ee gobolka functionalities tahay barnaamijka ka yihiin sahamiyey iyo arrimaha la xiriira waxaa lagu xalin mar ma at dhan gudahood sida ay tahay qaybta taas oo ka dhigaysa hubiyo in barnaamijka waddaa hab guulaystay iyo sida baahida iyo dalabaadka isticmaalaha:
3. horena Mode
User wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo in hab horena barnaamijka ayaa sidoo kale si loo hubiyo in ugu fiican iyo booska uu ka doonayo ee barnaamijka aan la xalin kaliya laakiin user sidoo kale helo natiijada ugu wanaagsan sida hawlo kale oo ay sabab u tahay jiritaanka marna soo dhibtay barnaamijka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in hab horena la bedelo haddii mid ka mid ah ayaa loo soo xulay oo aan shaqayn wanaagsan, iyo si sax ah.
Folder 4. Output
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in jidka wax soo saarka iyo folder waxaa loo doortay in ay goobta oo uu soo jeclaystay by user iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in ugu fiican oo gobolka ka mid ah Jidka tahay waa in la ansixiyay arrintan la xiriira si ay u hubiyaan in faylka la helo marka loo baahdo. Jidka gaarka ah ee arrintan la xiriira sidoo kale hubin doona in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay in ay tahay in la ansixiyay si ay u hubiyaan in waddada ayaa lagu qeexay si fiican u.
5. howlgal Mid ka mid ah suuqa kala
Waa arrin fiican in waxa la socda oo taariikhqorihii ahaa screen cute sida fursadaha iyo sidoo kale hawlaha kale ee ay tahay in la sameeyo la xiriirta barnaamijka ayaa dhamaantood la helay daaqad la mid ah barnaamijka iyo sabab la mid ah, waa sidoo kale in la xusay in user waa in la hubiyo in natiijada ugu fiican waa wax ay tahay in la xuso iyo in la qaatay si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan sameeyaan.
Heerka 6. Sample
Si aad u hubiso in video lagu duubay waxaa loo sameeyaa in HD waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in heerka shaybaarka waxaa sidoo kale la bedelay sida baahida iyo baahida user sida ay hubiyaan in user ma aha oo kaliya helo wax soo saarka ugu fiican, laakiin guud ahaan ka dhigi doonaa kabka ka screen la xiriira duubo waxaa sidoo kale lagu sameeyey hab ugu fiican. User ayaa sidoo kale loo baahan yahay si loo hubiyo in tayada hoose la doorto si ay ka tuurayeen screen diiwaan yar ee cabbirka iyo qeybsanaan ku xigeenka.
7. fursadaha video The
User waxay u baahan tahay si ay u hubiyaan in fursadaha video ah loo soo doortay si guud video rating iyo sidoo kale duubo la sameeyo hab ugu fiican. The functionalities guud iyo hawlaha la xidhiidha barnaamijka waa mid aad u fudud in ay sameeyaan iyo sababta la mid ah u tahay in la xuso in xal u ah arrimaha, Talooyin iyo tabaha oo dhan waxaa laga heli karaa in uu furmo hal si loo hubiyo in barnaamijka ka shaqeeya ugu fiican:
8. Gobolka doorashada
User ayaa u xulan kara gobolka gacanta iyo in la hubiyo in wax soo saarka ugu fiican ee laga helay gobolka guud ahaan ayaa loo soo xulay ayaa sidoo kale lagu previewed karo si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay in arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in ay hubiyaan in fursadaha loo isticmaalo si ay u helaan wax soo saarka ugu fiican iyo sidoo kale arrimaha guud ee la xiriira shubay shaashadda ayaa sidoo kale lagu xalin buuxda sameeyo:
9. Helitaanka wax soo saarka
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in folder saarka la heli fudayd iyo qanacsanaanta iyo geeddi-socodka waa mid fudud. Button ayaa u furan oo ay la socoto buuga wax soo saarka ay tahay in la sii adkeeyey si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo oo user helo si wax soo saarka si fudud:
10. channels Audio
User wuxuu hubin doonaa in channels audio loo soo doortay sida dabiiciga ah ee Screencast iyo habka guud ee ay tahay in la codsatay in arrintan la xiriira ka dhigi kara. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ay u baahan tahay si aad shaqo ee click hal sida isticmaalka qaybta waa mid fudud aad u.
Wondershare Video Convertor Ultimate waa ugu fiican oo gobolka ka mid ah wax soo saarka tahay in ay tahay in la isticmaalo arrintan la xiriira si aad u hubiso in natiijada waxa ay ka fiican marka la barbar dhigo oo taariikhqorihii ahaa screen cute oo isticmaalka barnaamijka in ay ka dhigaysa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee jeer oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in ay tixgelisaa in qodobbada soo socda ka hor inta iibka waxaa loo sameeyey ama xataa hab tijaabo ah loo xiraa:
Taageerada qaab barnaamijka waa weyn sida ay u hubiyaa in ka mid ah 150+ ah qaabab technology cusub ee HD iyo sidoo kale 4K waxaa gundhig.
Barnaamijka ayaa heerka sare by isticmaala sida ay sidoo kale yimaado oo la dhisay video taariikhqorihii sida waxa loo arki karaa kor ku xusan.
Rakibaadda guud ee taariikhqorihii video ay tahay mid fudud sida rakibo barnaamijka keenaysaa in natiijada isku mid ah iyo rakibo gaar ah looma baahna.
Barnaamijku waa video ah Suite dhamaystiran user sida oo ka mid ah video geeyo, tafatir, koobiyeynta iyo soo degsado sidoo.
Jidka si taariikhqorihii video ah ayaa sidoo kale la sameeyey fudud iyo user inay hubiyaan in jidka Menu> video taariikhqorihii la qaato si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo hab fudud oo ka dhigi kara.
> Resource > Video > Top 10 Talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan taariikhqorihii screen cute